Soo bandhigida Qalabka Relief Toolkit, oo ah goob isku xidha masiibooyinka oo dhan - Gargaarka Musiibada
Bogga ugu weyn/updates/Soo bandhigida Qalabka Relief Toolkit, oo ah goob isku xidha masiibooyinka
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Qalabka Gargaarka Masiibada ee Grassroots, oo ah goob mareegaha taageerta isgaarsiinta guud ahaan dadaallada musiibada ee shabakadeena baahsan, ayaa hadda nool! Anagoo kaashanayna Gargaarka Mutual Aid Relief, waxaan naqshadeynay oo dhisnay goobta labadii sano ee la soo dhaafay jacayl badan waxaana ugu dambeyntii diyaar u nahay dadka inay bilaabaan isticmaalkeeda.
Waxaad ka geli kartaa goobta www.relieftoolkit.com. Goobtu waxay bixisaa agabka isku xidhka qabanqaabiyayaasha iyo agabka iyo kobcinta awoodayada si aan ugu diyaargarowno, uga jawaabno, ugana soo kabsano musiibada iyada oo la raacayo mabda'a gargaarka wadaagga ah. Isticmaalayaashu waxay abuuri karaan oo wax ka beddeli karaan muuqaallada musiibooyinka waxayna si guud ula xiriiri karaan golayaasha iyo si gaar ah isticmaaleyaasha kale. Kooxaha ku salaysan gargaarka wadaagga ah ayaa sidoo kale awood u leh inay abuuraan muuqaallo kooxeed iyaga u gaar ah si kuwa kale ula xiriiraan iyaga. Dhowaan waxaan qorsheyneynaa inaan ku darno maktabad u oggolaan doonta isticmaaleyaasha inay ku daraan oo ay baadhiyaan agabka macluumaadka ee la xiriira gargaarka musiibada.
Fikradda goobta iyo sifooyinkeeda ayaa markii hore lagu soo saaray wadahadal lala yeeshay dadka ka shaqeeya gargaarka aasaasiga ah ee musiibada. Waxa kale oo aanu ku ururinay talooyinka sahan aanu ku weydiinay xubnaha MADR qalabkee ay dareemeen in ay ka maqan yihiin marka ay ka jawaabayaan masiibooyinka ka jira degaankooda iyo marka ay abaabulayaan guud ahaan shabakad baahsan.
Waxaan ogaanay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee sii qoto dheereynaya awoodaha shabakadeena ay tahay in aan lahelin qaab aan ku wadaagno oo aan ku qori karno waxa aan ku baranaynay xaaladaha deegaankayaga shabakada ballaaran. Waxaan bilownay inaan ku riyoonno sida awooddayada wax-ka-qabashada ay u kobci lahayd haddii aynaan u baahnayn inaan keligeenna xirfad u baranno masiibo kasta oo cusub. Maxaa dhacaya haddii markaan u baahanahay inaan barano sida loo hagaajiyo guriga, waxaan haysanay hage kooxeed khibrad u leh xirfaddaas si aan u gaarno? Maxaa dhacaya haddii casharrada aan ka baranay ku saabsan dhisidda awoodda soo kabashada lala wadaagi karo kuwa kale si ay u akhriyaan oo uga hadlaan? Maxaa dhacaya haddii la abuurayo meel bannaan oo lagu daabaco ilaha macluumaadka ee aan isticmaalno, dad badan oo shabakadeena ku jira ayaa lagu dhiirigeliyay inay abuuraan ilo u gaar ah oo ay ku wadaagaan?
Waxa kale oo aanu ogaanay in shabakadu aad u xiisaynayso in la helo gole dadweyne oo lagu abaabulo lagagana doodo hawshan dhexdeeda. Caadi ahaan, dunta Signal-ka, kanaalka Slack, ama bogga Facebook ayaa la sameeyay waxaana loo adeegsadaa in lagu wada xiriiro dhammaan dadaallada wax ka qabashada musiibada. Waxaa jira utility iyo ammaanka meelahan ku saleysan martiqaadka, kaas oo Qalabka Gargaarka uusan dooneyn inuu beddelo. Laakiin waxaan sidoo kale dareennay in madal ay faa'iidooyinkeeda yeelan doonto sidii meel fagaare ah oo la heli karo, la keydin karo, lana raadin karo wada-sheekeysi.
Kooxdayada horumarineed runtii aad bay ugu faraxsanaayeen inay dhisaan xal u helida caqabadahan sababtoo ah waxaan ka warqabnaa sida ay lama huraanka u tahay shaqada ku saleysan gargaarka labada dhinac in si wanaagsan loo taageero si loo daboolo baahida sii kordheysa ee loo qabo. Masiibooyinka cimiladu waxay kaliya sii kordhayaan soo noqnoqoshada iyo miisaanka halka dawladda iyo hay'adaha kale ee awooddu ay uga sii daraan xaaladaha soo kabashada iyada oo la kordhinayo militariga, gaar-yeelid, iyo isu dhiibid. Laakin ilaha ugu yar shabakadayagu waxay isticmaashaa hal-abuur si ay u daboolaan baahiyaha badbaadada inta aan baraneyno waxa qiyamkayaga uu yahay ficil ahaan. Waxaan wax badan baranaa mar kasta oo aan ka jawaabno. Rajadayadu waa in Qalabka Gargaarka uu naga caawin karo fududaynta wadaagga waxa aan baraneyno.
Qalabka Gargaarka aad buu weli ugu jiraa marxalad tijaabo ah oo xoogaa qallafsan oo geesaha ah. Waxaa weli jira cayayaanno aan u baahanahay inaan wax ka barano oo aan hagaajinno, waxaa jira xaddidaadyo aan rabno inaan horumarinno wax ka baxsan, iyo, in ka badan, waa tijaabo nagu caawin doonta inaan barano waxa aan faa'iido u lahayn shabakadeena. Waxaan uga mahadcelineynaa dulqaadka iyo talada dadka iyadoo kooxdayada yar ee tabaruca ku saleysan ay ka shaqeeyaan sidii ay u hagaajin lahaayeen dhiqlaha.
Haddii aad xiisaynayso inaad ka qayb qaadato mashruuca, wax badan ayaa hadhay oo la samayn karo. Waxaan u isticmaali karnaa gacmo badan oo dusha sare ah kooxdayada maamulka macluumaadka si aan u daabacno oo aan u cusboonaysiino macluumaadka. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan korino kooxdayada horumarinta hore iyo naqshadeeyayaasha goobta. Noogu soo dir email haddii aad xiisaynayso.
Eeg goobta ku taal www.relieftoolkit.com, samee profile-ka isticmaalaha, ku dar masiibo khariidada, ka biloow wada sheekeysiga golayaasha, ama ku dar profile koox ku salaysan gargaarka wadaagga ah ee aad ka tirsan tahay. Dabcan, fadlan nala soo socodsii haddii aad la kulanto arrimo ama faallo celin noogu hayso. Waxaad nagala soo xiriiri kartaa at [emailka waa la ilaaliyay].
Mahad ballaaran ayaa loo jeedinayaa horumariyeyaashii mashruucan nolosha keenay. Waxaana mahad weyn u sii jeedinaya dadka ku faraxsan inay tijaabiyaan qalabkan oo ay gacan ka geystaan ​​kobcinta soo celinta mashruuca mustaqbalka.
Waan sugi doonnaa inaan aragno dhammaantiin www.relieftoolkit.com.